Tadiavo an-tariby ivelany maloto voapetraka tunnel sos an-tariby / voip safidy - JWAT408, China Fitaovana rano miantso rano maloto avy any ivelany tunnel sos aorin-telefaona / voip safidy - JWAT408 Mpanamboatra, mpamatsy, Fividianana - Ningbo Joiwo explosion proof Technology Co., LTD
Telepon Analogue. Misy ny SIP misy.
Trano fonenana 2.Robust, vatam-paty aluminium maty.
3.Rofon-tarehy vita amin'ny vy vita amin'ny vovoka epoxy coated dia miaro tanteraka amin'ny vovoka sy ny hamandoana.
4.Vandalovana bokotra stainless mateza Ny bokotra iray ho an'ny valiny ary ny bokotra iray hafa dia ho an'ny antso vonjy maika.
Ny laharana finday vonjy maika azo apetraka araka ny fangatahan'ny mpanjifa.
5.Ny fiarovana ny toetr'andro IP66-67.
6. Horn & Jiro eo an-tampony dia misy.
7. Amin'ny alàlan'ny famatsiana herinaratra ivelany, ny haavon'ny feo dia mihoatra ny 80db.
8. Fandefasana tanana maimaimpoana.
11. CE, FCC, RoHS, ISO9001 no mifanaraka.
Hole mitarika 1-Ø10